दारु, माँस खाएर होईन, उपवास बसेर सरकार बनाउ, मधेश समृद्ध हुन्छ: डा. सिके राउत
राईट टु रि–कल, प्रत्यक्ष लोकतन्त्र, भ्रष्टाचार उन्मुलन, समाजिक न्याय, जनताराज ल्याउन जनमतको कार्यशैलीलाई दर्साए ।
बेलुकी ६:०९ बजे
न्यूज ब्यूरो, वीरगँज । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले दारु मासु नखाएर उपवास बसी सरकार बनाउन आग्रह गरेका छन् ।
प्रदेश नम्बर २ को पर्सा जिल्लाको पोखरियामा आयोजना गरिएको विशाल आमसभालाई सम्बोधन गर्दै डा. राउतले मधेशमा कुनै शुभ कार्य गर्दा उपवास बस्ने प्रचलनलाई राजनीतिमा पनि लागू गर्न सके रामराज उदय हुने विश्वास दिलाए ।
मधेशको संस्कृतिलाई स्मरण गराउँदै डा. राउतले मधेशमा कुनै पनि शुभ कार्य हुदा यहाँ उपवास बसेर गरिन्छ। तर हामी सरकार निर्माण जस्तो पबित्र काम गरिरहदा मान्स दारु खाएर गर्छौ के त्यसरी राम्रो सरकार निर्माण हुन सक्छ त ? उनले प्रश्न पनि गरे ।
सरकार निर्माण जस्तो पबित्र काममा कसैको पनि दारु मान्स नखाई उपवास बसेर स्वच्छ उम्मेदवारलाई जिताउन अनुरोध गर्दै उनले राईट टु रि–कल, प्रत्यक्ष लोकतन्त्र, भ्रष्टाचार उन्मुलन, समाजिक न्याय, जनताराज ल्याउन जनमतको कार्यशैलीलाई दर्साए ।
पर्सा जिल्ला वीरको भूमि रहेको बताउँदै उनले परिवर्तनकारी आन्दोलनमा पर्सा जिल्लाको आफ्नो गाथा रहेको सुनाए । “आज भन्दा ५०–६० वर्ष पहिले मधेशको धान सिंगापुर , साउथ कोरिया निर्यात हुन्थ्यो , तर आज हेर्नुस् अर्बौंको धान आयात भैरहेको छ ,आखिर किन्न ? हाम्रो यहाँ प्रजातन्त्र , लोकतन्त्र , गणतन्त्र , संघीयता जस्तो पबित्र वयवस्था आयो तर पनि समाजमा किन्न समृद्धि आउन सकेन ? यी सबैको एउटै कारण हो कि व्यवस्था परिवर्तन भए पनि पात्र परिवर्तन भएन। जनता राज आएन । तसर्थ, अबको आउने चुनाबमा पात्र परिवर्तन गरि नयाँ भिजनेरी उम्मेदवारलाई मतदान गरि जनताराज ल्याउनु पर्छ।”– उनले भने ।
जनताराज ल्याउनको लागि जनमत पार्टीको लाउड्स्पिकरमा मतदान गरि बिजय बनाउन आग्रह पनि उनले मँचबाटै गरे । उनले भने,– “धेरै दिनदेखि खाईरहेको औषधिले रोग निको भैरहेको छैन भने औषधि परिवर्तन गर्नु पर्छ। त्यसरी नै यी पार्टीलाई बदलेर लाउड्स्पिकर नामको औषधि खाएर हेर्नुहोस् ।”
कार्यक्रममा बोल्दै जनमत पार्टीका राष्ट्रिय उपाध्यक्ष ई. बसन्त कुश्वाहाले वर्तमान अवस्थामा देशमा भ्रष्टाचार जस्तो धमिरा चरम सिमामा पुगेकोले यसलाई प्रास्त गर्नु जरुरी भएको बताए ।
पोखरिया नगरपालिकाकै उदाहरण दिदै ई. कुश्वाहाले ५ वर्षकै बजेटलाई नगरपालिकाको हरेक घरमा बाँडेपनि प्रति परिवार पाँच लाख पर्ने बताउँदै त्यो अपेक्षाको विकास भएको ? भनेर प्रश्न तेर्साए ।
“हामी आफै समिक्षा गरौं के त्यो बराबरको बिकास भएको छ ? होईन भने पुनः हाम्रो मत उसैलाई किन्न ? हामी आफैलाई सजग बन्नु पर्ने अवस्था आएको छ।”– उनले भने ।
आउने चुनाबमा कुनै पार्टीले मत माग्न आए अघिल्लो पाँच वर्षको हिसाब किताब माग्न आग्रह गर्दै उनले दिन सकेन भने तु को तु जनकारबाही गरेर पठाउन पनि आग्रह गरे ।
समृद्ध मधेश निर्माणका लागि एक मात्र पार्टी जनमत पार्टी रहेकोले आउने चुनाबमा जनमतको लाउड्स्पिकरमा मतदान गरि जनमतको सरकार बनाउन अनुरोध समेत गरे ।
कार्यक्रममा अर्का उपाध्यक्ष नेता अबदुल खानले यसै पोखरिया नगरपालिकाको तिलाबे पुल नबन्नुको कारण जसपा नेता हरि नारायण रौनियार रहेको दाबी गरे ।
मधेशमा बिधमान अशिक्षा, बेरोजगारी , गरिबीको मुल जड यही सत्ताधारी काङ्ग्रेस , कम्युनिस्ट , जसपा ,लोसपा रहेको बताउदै यी पार्टीहरुलाई आउने चुनाबमा सखाप गरि एक क्षत्र जनमतको सरकार बनाउन अनुरोध समेत गरे ।
जनमत पार्टी पोखरिया नगरपालिका अध्यक्ष चन्दन चौहानको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रुपमा जनमत पार्टीको राष्ट्रिय अध्यक्ष डा. सीके राउतको उपस्थिति रहेको थियो ।
प्रमुख अतिथि डा. राउतले कार्यक्रम स्थल नजिकै रहेको सहिद चनदन पटेलको स्तम्भमा फुलमाला लगाएर सम्मान समेत गरेको थियो ।